2019 #NABShow Adobe ကကြီးမားသော Creative Cloud ဖြန့်ချိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow Adobe ကကြီးမားသော Creative Cloud ဖြန့်ချိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
အဆိုပါ 2019 #NABShow: ယခုရရှိနိုင်ပါ! Adobe က Adobe က Creative Cloud စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဆက်ဆက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေလတံ့သောဗွီဒီယိုနဲ့အသံ tools တွေကိုအသစ်တီထွင်မှုများကြေညာခဲ့သည်။ Adobe က Creative Cloud အပါအဝင်ရုပ်ရှင်, တီဗီ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် streaming များစီမံကိန်းများကိုတစ်ကျယ်ပြန့်ဖို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေးထား Clemency, Fox ကအားကစား, နောက်ဆုံး San Francisco မှာအနက်ရောင်လူသား, ဇာတိသားတော်အဆိုပါမြေပဲထောပတ်စွန်ငှက်, Wu-Tang Clan ရဲ့: MICS လူ နှင့် Vice Media ကို Adobe က Creative Cloud အရှိဆုံးဘက်ပေါင်းစုံထုတ်ကုန် Workflows ပေးခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုက apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအချို့ပေးထားပါတယ်။
Creative Cloud ယခုရရှိနိုင်သည့်ဦးတည်ချက်အတွက်သင့်ရဲ့ post ကိုထုတ်လုပ်မှု "လည်" ပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်းဆင်းသက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း features အသစ်ဖြစ်ကြ၏။ အကြောင်းအရာ-သိမှီအောင် Adobe က Sensei, ခေါင်းစဉ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်အသစ်စွမ်းရည်, သောင်မတင် animations တွေကိုသန့်စင်အသံရောစပ်, နှင့်စီမံကိန်းမီဒီယာစည်းရုံးရေးနှင့်ပြင်ဆင်နေနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏အတုထောက်လှမ်းရေး (AI အ) နှင့်စက်သင်ယူမှုနည်းပညာ, စွမ်းအားဖြင့်, ဗီဒီယိုအဘို့။ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုရာပေါင်းများစွာပိုမြန်ပါဝင်သည် မျက်နှာဖုံးခြေရာကောက် ဆိုးကျိုးများနှင့်အရောင် Workflows, Dual GPU ကို optimization နဲ့ Premiere Pro မှာ HEVC နှင့် H.264 ကို formats များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော hardware acceleration ကိုပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ခုနှစ်တွင်တိုးမြှင့်မှုများထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုအရောင်နှင့် Roughen အစွန်းများအဖြစ် GPU ကိုအရှိန်မြှင့်သက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်။
"ကို Adobe Creative Cloud မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါတို့သည်စံချိန်အချိန်အတွက်သန်းခုနစ်ခုကျော်အွန်လိုင်းနောက်လိုက်ဖို့ဒီနှစ်အကြောင်းအရာ 200 အပိုင်းပိုင်းပို့ပါတယ်" ပျား Pueringer နှင့်ဆမ် Gorski, စင်္ဒစ်ဂျစ်တယ်ပူးတွဲတည်ထောင်သူကဆိုသည်။ "ဒီနေ့ကို Premiere Pro ကိုလွှတ်ပေးရန်အတွက်အသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ငါတို့သည်ပို့ကုန်ကြိမ်အရှိန်မြှင့်အစာရှောင်တည်းဖြတ်မီးပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဖန်တီးသူဖြစ်လာဖို့ကို dual GPU ကိုထောက်ခံမှုကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
ကွန်ဗင်းရှင်းယခုနှစ် 2019 မှာ goers #NABShow အသစ်ရရှိနိုင် features တွေမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရမှာစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများထံမှကြားနိုင်မည် Adobe ကတဲ (#SL5610 သည် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အတောင်ခန်းမ) နှင့် 100 ကျော်မှာ မိတ်ဖက် ဧပြီလ 8-11 ထံမှပြခန်း။ အတွက် Tune Facebook မှာတိုက်ရိုက်4နံနက် PST မှာဧပြီလ9အပေါ် Jason Levine သစ်ကိုဖွင့်အဘယျသို့အကြောင်းကြားရန်နှင့်အတူ။
"ဗီဒီယိုစားသုံးမှု, ထုတ်လွှင့်ဖြတ်ပြီးပေါက်ကွဲရုပ်ရှင်, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး streaming, content တွေကိုဖန်တီးမှုတောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာဆူးအတွက်ရရှိလာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်" စတီဗင်ဖြစ်တဲ့ Warner, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုနှင့်အသံ, Adobe က၏ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။ "optimized စွမ်းဆောင်မှုနှင့် Adobe က Sensei စွမ်းအားဖြင့်အသိဉာဏ် features အသစ်အားဖြင့် Creative Cloud သူတို့ဇာတ်လမ်းပြောပြနဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုဗျာဒိတ်ရူပါရုံအပေါ်ကွပ်မျက်အာရုံစိုက်နိုင်အောင်ကဗီဒီယိုပညာရှင်များအများဆုံးငွီးငှေ့ဖှယျထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ကူညီပေးသည်။ "
အလိုအလျှောက်မလိုချင်တဲ့တ္ထု Remove နှင့်အတူ အကြောင်းအရာ-သိမှီအောင် အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်အတွက် -Formerly စီမံကိန်းရင်ခွင်, ဗီဒီယိုများအတွက်အကြောင်းအရာ-သိမှီအောင်ကို Adobe Sensei တို့က powered နှင့်ငွီးငှေ့ဖှယျကို manual အလုပျနာရီချွေတာ, စန်း MICS, နိမိတ်လက္ခဏာများ, အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ရိုက်ကူးခြင်းမှပင်ကလူနဲ့တူအမြင်အာရုံဒြပ်စင်ဖယ်ရှားခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ထဲမှာသင့်မီဒီယာ Organize နှင့်ကွက်ကို Freeform Project မှ panel က Premiere ပြေးအတွက် အမြင်အာရုံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ရိုက်ချက်ရွေးချယ်မှု, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များကို, ဇာတ်လမ်းအိုင်ဒီယာအဖြေရှာတဲ့နှင့်စည်းဝေးပွဲကိုတည်းဖြတ်များအတွက်အပြင်အဆင်သိမ်းဆည်းပါ။
အတူတိများနှင့်ကိုက်ညီမှုနှင့်အတူဒီဇိုင်း အစိုးရသောမင်းတို့နှင့်လမ်းညွှန်များ - ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူ, TITLE align သက်ရောက်မှုလှုပ်ရှားပုံများနှင့် Deliverable ဖြတ်ပြီးကိုက်ညီမှုသေချာစေရန်အောင်, Premiere Pro ကိုအတွင်းအပြင်အကျွမ်းတဝင် Adobe ကဒီဇိုင်းရေးကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ပိုလန်အသံအလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်နှင့်အတူ လာကြတယ်နှင့် Roll Audition- အတွက် အဆိုပါ feature အသစ်နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့နှင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များဖန်တီးသူအပါအဝင် longform မှတ်တမ်းတင်ဘို့ Waveform နဲ့ Multitrack နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ထိရောက်ထုတ်လုပ်မှု Workflows, ပေးပါသည်။
အက္ခရာတိရစ္ဆာန်နှင့် Twitch တိုက်ရိုက်-လွှ TRIGGER အတွက်အံ့အားသင့်စရာကြည့်ရှု Extension- ပရိသတ်တွေ On-The-ပျံသန်းဝတ်စုံအပြောင်းအလဲလက်တန်းကခုန်ရွေ့လျားနှင့်လက်မှတ်အမူအရာတွေနဲ့ Real-time အတွက်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဖြစ်စေ-တစ်ဦးအပြန်အလှန်ပင်သုံးပြီးငွေရှာရန်နည်းလမ်းသစ်ရှိရာတိုက်ရိုက်လွှဖျော်ဖြေပွဲတိုးမြှင့်နေကြသည် bits လုပ်ရပ်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့။
နဲ့အသံရောနှော Generate အော်တို duck စာရင်းစစ်များနှင့် Premiere ပြေးအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အသံသည်များအတွက် Adobe က Sensei တို့က Powered, အော်တို duck ယခုစကားပြောပေးတဲ့ dialog ဆန့်ကျင်ပတ်ဝန်းကျင်အသံမှပြောင်းလဲနေသောချိန်ညှိဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Keyframed ချိန်ညှိကိုယ်တိုင်တစ်ဦးရောနှောကျော်ဖန်တီးမှုထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှဒဏ်ငွေ-ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါသည်။
အမြင်အာရုံအမျိုးမျိုး Add - Adobe ကစတော့အိတ် ယခုမူပိုင်-အခမဲ့, တာဝန်ယူထားသော, 10 သန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတစ်ခုကျယ်ပြန့်စုစည်းပေးထားပါတယ် HD နှင့်ဦးဆောင်အေဂျင်စီများနှင့်လွတ်လပ်သောအယ်ဒီတာများအနေဖြင့် 4K ဗီဒီယိုနှင့် Motion Graphics တင်းပလိတ်များတဲ့စီမံကိန်းတွင်ရိုက်ချက်များသို့မဟုတ်အဆာကွာဟချက်တည်ထောင်, အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုသုံးစွဲဖို့။
ရိုက်ကူး မှစ. Showtime မှ - Premiere Rushပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းမိတ်ဆက်, On-The-go တည်းဖြတ်ရေးနှင့်ဗီဒီယိုပရိသတ်အဘို့ကို Premiere Pro ကိုအတူပေါင်းစည်းထားတဲ့အကျိုးရှိစွာမိုဘိုင်း-to-desktop ပေါ်ကလုပ်ငန်းအသွားအလာပေးထားပါတယ်။ Premiere Rush အတွက် built-in ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်လိုလားသူအရည်အသွေးဗီဒီယိုကိုယူကူညီပေးသည်။
Adobe က Creative Cloud များအတွက် feature အသစ်များ Creative Cloud ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့ယခုရရှိနိုင်ပါ NAB မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ စျေးနှုန်းအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, ခရီးစဉ်ကို www.adobe.com/creativecloud/plans.html။ Adobe ကစတော့အိတ်များအတွက်အကွိမျမြားစှာကြေးပေးသွင်းအစီအစဉ်များမှာရရှိနိုင်ပါ stock.adobe.com/plans.
Adobe က Inc က San Jose, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံစုံကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသမိုင်း၏ဖန်တီးမှုအပျေါမှာအာရုံစူးစိုက်ထားပါတယ် မာလ်တီမီဒီယာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုဦးတည်နေတဲ့လတ်တလော foray နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆော့ဖ်ဝဲလ်များ။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး	2019-04-03
ယခင်: Adobe Premiere Pro ကိုများအတွက် Marquis အသံလွှင့်မိတ်ဆက် Postflux
နောက်တစ်ခု: NUGEN အသံ 2019 NAB မှ Netflix-ကိုက်ညီ Solutions များရရှိစေ